कुनै पनि युवतीसँग कसरी कुरा अघि बढाउने ? केहि टिप्सहरु - यादका टुक्रा
कुनै पनि युवतीसँग कसरी कुरा अघि बढाउने ? केहि टिप्सहरु
2 years ago 4771 Views
हुनसक्छ तपाइँलाइ शपिंग मल, अफिस, कलेज या कतै कुनै साह्रै सुन्दर केटि देखेर ऊ संग कुरा गर्न मन लागोस्। तर कसरि कुरा अगाडी बढाउने भन्ने नजानेर चुपचाप त्यहाबाट बाहिर निस्कन परेको होस्। आज यो लेखमा दिएका सुझावहरुलाई पालना गरेर कुनै पनि परिस्थतिमा केटि मान्छे संग बातचित सुरु गर्न जान्ने बन्नुहोस्।
जिस्किने खालका कुराहरु : उसको प्रशंशा गर्नुहोस्। इमान्दार अनि सालिन भएर उसलाई भन्नुहोस् कि, उसको मुस्कान कति धेरै सुन्दर छ। तपाईं उसले गलामा लगाएको मालाको तारिफ गरिदिनुहोस्। भन्नुहोस् कि, उसले लगाएको को ड्रेसले उसलाई खुब सुहाएको छ। यसरि उसलाई खास महसुस गराउनुहोस्। तर यो ध्यानमा राख्नुहोस् कि यसरि तारिफ गर्दा अति धेरै नहोस्। जसले गर्दा उसलाई तपाईं छिचरो लाग्न सक्छ।
सब्द बिहिन इशाराको प्रयोग : तपाईं सब्द बिहिन इशारा हरुको पनि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हाउभाउ अनि अनुहार को मुद्राले तपाइंले चाहानु भयो भने जुनसुकै कुरा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हाउभाउमा खुलापन अनि निमन्त्रणाको संकेत राख्नुहोस्। नजर मिलाउनुहोस् अनि थोरै मुस्कुराउनुहोस । जब तपाईं उसलाई कुनै कुराहरु सुनाउंदै हुनुहुन्छ भने बिस्तारै उसको हात या कुममा छुनुहोस्। यसले घनिष्ठता बढाउनुको साथै तपाइँ हरुलाई मित्रताको परिधि बाहिर लिएर जान्छ। तर नकारात्मक हाउभाउ जस्तै हात बाँध्नु, भुइमा नजर झुकाउनु जस्ता क्रियाकलाप बाट बच्नुहोस्।
परिचय जुन केटि संग तपाइँ कुरा गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसको नजिक जानुहोस्, मुस्कुराउनुहोस अनि अभिवादन गर्नुहोस्। उसलाई आफ्नो नाम भन्नुहोस् अनि उसको नाम सोध्नुहोस्। इमान्दारीले गरेको शालीन परिचय फसाउने घटिया कुरा भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। जुनसुकै स्थितिमा पनि सिधा अनि छोटो परिचय दिने बानि गर्नुहोस्। जस्तो कि, “हाइ, मेरो नाम समिर हो। अनि तपाइँको?” कुनै कफीसपमा तपाइँ केटीलाई कफी पिउने आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि “हाइ, मेरो नाम समिर हो। के मा तपाईंको लागि कफी किन्न सक्छु?”
उसको हालखबर सोध्नुहोस् : धेरै पहिले देखि नै कसैलाई पनि, उसको हाल के छ, उसको दिन कसरि बित्यो, भनेर सोध्नु गफगाफ सुरु गर्ने सबै भन्दा उत्तम उपाय हो। यसले साँच्चिकै राम्रो प्रभाव पनि पार्छ किनकि यसरि तपाइंले उसको बारेमा सोध्दा उसलाई लाग्छ कि, तपाइँ साच्चिकै उसको बारेमा जान्न चाहानु हुन्छ। सिधा अनि सामान्य प्रश्न गर्नुहोस। जस्तो कि “आजको दिन कस्तो रह्यो त?” प्रश्न गरिसकेपछि त्यसको जवाफ पनि ध्यान दिएर सुन्ने गर्नुहोस्। नत्र उसलाई त्यो मात्र आलंकारिक प्रश्न लाग्न सक्छ।
मौसमको बारेमा कुरा गर्नुहोस् : मौसमको बारेमा कुरा गर्नु त सधैं उपयुक्त हुनसक्छ। यस्तो केहि भन्नुहोस्, “आज कति धेरै घाम लागेको/ पानि परेको है?” यसले तपाइँहरुलाई कुरा सुरु गर्न सुरक्षीत बातावरण बनाइ दिन्छ। एकपटक जब उसले जवाफ दिनेछिन तब तपाइँ अरु कुनै मजेदार कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। मौसमको बारेमा कुरा गर्दा त्यसलाई एक बाक्य नभएर प्रश्न बनाएर सोध्नुहोस्। जस्तै “आज त कति सितल दिन छ है? के तिमीलाई पनि पानि परे हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ?” यसरि सोध्दा उसलाई उत्तर दिने मौका मिल्छ।
काम या पढाइको बारेमा सोध्नुहोस् : कुराकानीमा सुन्यतालाई तोड्नका लागि कुनै न कुनै सामान्य आधार त हुने पर्छ। त्यसैले कुराकानीलाई अगाडी बढाउन उसको पढाइ या कामको बारेमा सोध्नुहोस्। यदि तपाईंहरु एकै कक्षामा अध्ययन गर्नुहुन्छ भने, “तिमीलाई त्यो सर कस्तो लाग्छ?, तिमीलाई त्यो मान्छे कस्तो लाग्छ?” जस्ता प्रश्न सोधेर उसको रुचिको बारेमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंहरु साथमा काम गर्नुहुन्छ भने उसलाई सोध्नुहोस् कि “उसको प्रोजेक्ट कस्तो जादैछ?”
कुनै कमन साथिको बारेमा कुरा गर्नुहोस् : यदि तपाई उसलाई राम्रो संग चिन्नु हुन्न भने पनि ऊ संग गफ गर्दा कुनै कमन फ्रेन्डको बारेमा कुरा निकाल्नु भयो भने तपाईलाई ऊ संग नजिक हुन सहायता मिल्नेछ। उसलाई पनि केहि सहजता मिल्नेछ किनकि तपाइँ एकदमै पराइ हुनुहुन्न। कमन फ्रेन्ड भएपछी तपाईंहरुलाई कुरा गर्नको लागि कम्तिमा एक व्यक्ति मिल्नेछ। केहि यस्तो भन्ने कोशिस गर्नुहोस् “मैले सुनेको कि तपाइँ र आराती मिल्ने साथि हो रे। तपाइँ आरातिलाई कसरि चिन्नु हुन्छ?” या त “ओहो तपाइँ ज्योतिलाई चिन्नुहुन्छ? ऊ र मा पुराना साथि हौँ नि।” हुनसक्छ तपाइँलाइ शपिंग मल, अफिस, कलेज या कतै कुनै साह्रै सुन्दर केटि देखेर ऊ संग कुरा गर्न मन लागोस्। तर कसरि कुरा अगाडी बढाउने भन्ने नजानेर चुपचाप त्यहाबाट बाहिर निस्कन परेको होस्। आज यो लेखमा दिएका सुझावहरुलाई पालना गरेर कुनै पनि परिस्थतिमा केटि मान्छे संग बातचित सुरु गर्न जान्ने बन्नुहोस्।
परिचय : जुन केटि संग तपाइँ कुरा गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसको नजिक जानुहोस्, मुस्कुराउनुहोस अनि अभिवादन गर्नुहोस्। उसलाई आफ्नो नाम भन्नुहोस् अनि उसको नाम सोध्नुहोस्। इमान्दारीले गरेको शालीन परिचय फसाउने घटिया कुरा भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। जुनसुकै स्थितिमा पनि सिधा अनि छोटो परिचय दिने बानि गर्नुहोस्। जस्तो कि, “हाइ, मेरो नाम समिर हो। अनि तपाइँको?” कुनै कफीसपमा तपाइँ केटीलाई कफी पिउने आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि “हाइ, मेरो नाम समिर हो। के मा तपाईंको लागि कफी किन्न सक्छु?”
कुनै कमन साथिको बारेमा कुरा गर्नुहोस् : यदि तपाई उसलाई राम्रो संग चिन्नु हुन्न भने पनि ऊ संग गफ गर्दा कुनै कमन फ्रेन्डको बारेमा कुरा निकाल्नु भयो भने तपाईलाई ऊ संग नजिक हुन सहायता मिल्नेछ। उसलाई पनि केहि सहजता मिल्नेछ किनकि तपाइँ एकदमै पराइ हुनुहुन्न। कमन फ्रेन्ड भएपछी तपाईंहरुलाई कुरा गर्नको लागि कम्तिमा एक व्यक्ति मिल्नेछ। केहि यस्तो भन्ने कोशिस गर्नुहोस् “मैले सुनेको कि तपाइँ र आराती मिल्ने साथि हो रे। तपाइँ आरातिलाई कसरि चिन्नु हुन्छ?” या त “ओहो तपाइँ ज्योतिलाई चिन्नुहुन्छ? ऊ र मा पुराना साथि हौँ नि।”
Don't Miss it सामान्य रुपमा नै कसरी केटाहरु आकर्षित हुन्छन् ? रुपले होइन, यसरी बन्छ सम्बन्ध
Up Next एकअर्कासँग टाढा हुँदा कसरी फोनबाट नै सम्बन्धलाई रोमान्चक बनाउने ?
5 months ago 1579 Views
जस्तोसुकै कालो खुट्टालाई पनि यसरी बनाउनुहोस् केही मिनेटमै चमकदार
मौ’सम परिवर्तनपछि सबैभन्दा धेरै असर छा’लामा पर्ने गर्दछ । आज हामी तपाईलाई खुट्टालाई गोरो र चम्किलो बनाउने केही उपायका बारेमा…
बिहान नास्ता गर्नु के वास्तव मै फाइदाजक हुन्छ त ? पढ्नुहोला
रेखा के हेर्छौ आफ्नो हातको किस्मत त उसको पनि हुन्छ जसको दुईटै हात हुदैन
१. दुनियाको मान्छे धेरै निर्दयी छ, उसले तिम्रो दुख दर्द मा रोइ रोइ सोध्छन र हाँसी हाँसी सारा दुनियालाई बताउछन…